Cajal: Website-yada Website-yada WordPress Noocyo Waxaad Abuuri Kartid
WordPress waa mid ka mid ah hababka maareynta maadooyinka ugu caansan waxaana uu gacan ka geysanayaa dhisidda bogag internet iyo blog. Iyada oo ku saleysan tirakoobka dhawaan, WordPress waxaa isticmaala in ka badan toddobaatan boqolkiiba bloggers iyo webmasters adduunka oo dhan. Ka hor intaadan dhisin goobta, waxaad u baahan doontaa magac domain iyo martigalin. Ugu dambeyntiina, dhammaan qalabyada la heli karo, mawduucyada, iyo plugins ayaa kuu oggolaan doona inaad sameyso bogga cajiibka ah, oo ka soo jeeda shakhsiyaadka shakhsi ahaanta ah ee magacooda caanka ah.
Oliver King, oo ah khibrad hormuud u ah Semt , wuxuu soo jeedinayaa inuu eego noocyada bogagga aad ka abuuri kartid WordPress.
1 - no deposit casino bonus codes 2015. Blog iyo Shabakada Shaqsiga
WordPress wuxuu ku bilaabay safarkiisa si fudud oo loo yaqaan 'blogging platform' waxaana loo beddelay habka maamulka maareynta ee awoodda leh. Sanadihii la soo dhaafay, boqolaal kumanaan oo ka mid ah bogagga internetka iyo blogyada ayaa la dhisay iyadoo la isticmaalayo WordPress. Way badan yihiin wanaaga, qaan-gaar ah iyo casri ah weligoodba, waxaadna ka baran kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah blogyadaas. Wordpress waxay leedahay aalado iyo mowduucyo badan oo ay kala doortaan, waxaadna si sahlan u kobcin kartaa barta shakhsiyeed ama goobta.
2. Website-ka ganacsiga
Wixii ganacsato ah iyo magac, WordPress waa habka ugu wanaagsan uguna haboon ee lagu horumariyo goobo xirfadle ah oo lagu fiirsado daqiiqado gudahood. Ku dhowaad dhammaan noocyada waawayn iyo shirkadaha ayaa durbadiiba isticmaalaya WordPress si ay u awood u yeeshaan boggooda maaddaama ay siinayso fursado badan oo ay ku koraan ganacsigooda.
3. Websaytka eCommerce
Wordpress waxay noqotey xal aad u adag oo waxay gacan ka geysatey dhismaha goobo ganacsi. Mashruucyada aadka u wanaagsan iyo mowduucyada ayaa kuu fududeynaya inaad horumariso goobaha aad dooratay. Qaar ka mid ah fiilooyinka caanka ah ayaa ah WooCommerce, WPEcommerce, iyo EASI Digital Downloads, kuwaas oo gacan ka geysanaya in aad u bedesho goobtaada si ay u noqoto mid si buuxda u shaqeeya oo dhameystiran. Waxa kale oo ay kaa caawineysaa in aad aqbashid lacagaha internetka, maaraynta liiska, canshuuraha, maraakiibta iyo macaamiishaada hal hal saqaf..
4. Guddiga Shaqada
Haddii aad raadineyso inaad sameyso guddi shaqo oo internetka ah, waxaad isku dayi kartaa inaad isku daydo WordPress. Qaar ka mid ah website-yada caanka ah sida Problogger iyo Smashing Magazine waxay isticmaalaan WordPress si ay u sameeyaan goobo qurxoon. Nidaamkan maareynta maadada waxay noo ogolaanaysaa inaan abuurno boorsooyin shaqo halkaasoo loo-shaqeeyayaashu si sahal ah u diri karaan liiska shaqooyinka, xirfadlayaashuna waxay dalban karaan internetka.
5. Tusaha Ganacsiga
Sida boondhooyinka shaqada, waxaa jira baahi weyn oo loogu talagalay wicitaanada ganacsiga, WordPress waxa uu leeyahay noocyo badan oo taxane ah oo ku saabsan shirkadaha ganacsiga si ay u kala doortaan. Waxa kale oo aad abuuri kartaa wicitaano websaydh ah oo aan ku koobnayn ganacsi hal
6. Su'aal iyo Jawaab Website
Haddii aad raadineyso inaad abuurto Stack Exchange, Quora iyo Yahoo Jawaabta version, WordPress ayaa kuu sahli kara shaqadaada. Isku diyaari nidaamkan maareynta maareynta nidaamyada iyo qalabyada kala duwan oo aad ku bilowdid bulshada internetka ee wacan.
7. Bogagga diiniga ah iyo kuwa diineed
WordPress, waa dhakhso iyo fududahay in la abuuro goobo tayo sare leh iyo goobo diineed. Waxay leedahay waxoogaa khaas ah, waxaadna ku dari kartaa foomamka deeq-lacageedka iyo foomamka lacag-bixinta si sahlan. Sidoo kale, waad aqbali kartaa deeqdaada iyada oo loo marayo PayPal, wax walbana waa sababtoo ah WordPress.
8. Website-yada Portfolio
Haddii aad ubaahan tahay meesha ugu fiican ee aad ku muujin karto faylalkaaga, waa inaad ku dartaa boggaaga WordPress. Tani waa habka maareynta kaliya ee macaamiisha ah oo kaa caawineysa inaad abuurto sawirrada sawirrada muuqaalka leh iyo rikoodhada cajiibka ah si adduunku u barto inuu ka ogaado hal-abuurnimadaada iyo awoodaada
9. Websaydhada Kuuboon
Haddii aad doonayso inaad kasbato xafiisyada xafiisyada ku leh boqolaal ilaa kun oo goobood oo bixiya qiimo gaar ah oo ku saabsan badeecadahooda iyo adeegyadooda, waa inaad sameysid website-kaaga kuuboon oo aad bilowdo. Wordpress wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto, maamusho kuna dhamayso tigidhada internetka. Waxaad sidoo kale qiimeyn kartaa oo aad u codeyn kartaa rasiidhadaada, waxaas oo dhanna waxaa lagu sameeya guddiga maamulka ee WordPress.
10. Websiyada Iuction
Haddii aad raadineyso shabakad sida eBay oo laga yaabo in maalin walba la qabto maalmo, waxaad isticmaali kartaa WordPress si aad u abuurto bogga isboortiga oo dhan. Isticmaalayaashu waxay dalban karaan, bixiyaan lacagaha iyada oo xulashooyin ammaan ah oo aad wax badan ka kasban doonto goobta xaraashka.